बिर्तामोडको बीएण्डसीमा मानसिक रोगको उपचार सुरु « aamsanchar.com , aamsanchar
नेपालमा नै पहिलो पटक झापाको बिर्तामोड स्थित बीएण्डसी मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ्ग हस्पिटलमा मानसिक रोगको उपचार सुरु भएको छ । मस्तिष्कबाट उत्पन्न हुने भावना, आभाष, स्मृति, विचार, बोली, चेतना आदिमा गडबवडी हुने समस्या मानसिक रोग हो । यो अवस्था लगातर रहिरहेमा मानसिक समस्याको शंका गर्नुपर्छ कतै तपाईमा यस्ता समस्या छैन ? बीएण्डसी मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ्ग हस्पिटलका मानसिक रोग विशेषज्ञ एवं मनोविश्लेषक डा.कञ्चन दाहालसंग आमसञ्चारकर्मी नरेन्द्र ढकालले गरेको कुराको संम्पादित अंश :
के हो मानसिक रोग भनेको ?
– मानसिक रोग भनेको मानिसमा गलत धारण उत्पन्न भएर विभिन्न नकरात्मक सोच्ने र उदासिनपन हुनुलाई मानसिक रोग भनिन्छ । मानसिक रोग लागेको भन्नासाथ ‘पागल’ भएको भन्ने सोच्ने गरिन्छ । तर, मानसिक रोगी भन्नासाथै ‘पागल’ बाहेक अरु समस्या भएका पनि जान्ने गरिन्छ । मानिसमा विद्यमान यस्तो धारणा हटाउन जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्नुपर्छ । प्रायजसो मानसिक चिकित्सकले मानसिक समस्यालाई मनोरोग तथा नशाको रोग भन्ने गर्छन् । मानसिक स्वास्थ्यअन्तर्गत धेरैजसोमा डिप्रेशन र एन्जाइटी (डर, त्रास) को समस्या हुने गरेको पाइन्छ ।
मानसिक रोग कस्ता कस्ता हुन्छन् ?
– मानसिक रोग धेरै किसिमका हुन्छन् । कुनै समान्य किसिमको हुन्छ भने कुनै जटिल किसिमका हुन्छन् । त्यसालाई भने ख्याल गर्न आवश्यक छ । डिप्रेसन यो रोगका बिरामीहरु निराश हुने, दिक्क हुने, नराम्रो संग हाँस्ने, बारम्बार रुने, हातखुट्टा झमझम गर्ने, टाउको दुख्ने, बाँच्न भन्दा मर्न बेस भन्ने र कतिपय बिरामीले आत्महत्या गरेको पनि पाईएको छ । डिप्रेसन नेपालमा पाईने एउटा मूख्य मानसिक रोग हो । यो नेपालमा बढी पाईन्छ । जीवनभरमा २०–२५ प्रतिशत मानिसमा डिप्रेशन हुन्छ । यो उपचार गरे निको हुने रोग हो । यसको बेलैमा पहिचान गरेर उपचार नगर्ने हो भने मानिसले गलत बाटो रोज्न प’ग्छ ।
झापामा आत्महत्याको दर बढ्न’ यो पनि एक कारण हो । त्यस्तै मानसिक रोगीहरु टाउको दुख्ने, निद्रा नलाग्ने, डर लाग्ने, मन उदास भैरहने, जोसजाँगर हराएर जाने, मुटु ढुकढुक हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, बेहोश हुनेजस्ता लक्षण पनि देखिन्छ । तनाव मुख्य कारण भएपनि मानसिक रोगका अन्य धेरै कारण हुन्छन् । तनावका धेरै कारण हुन्छन् । जसमा वंशाणुगत, पारिवारिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक जस्ता तनावले मानसिक रोग बढाउन भूमिका खेल्छन् । यो विषयमा भने स्वयम आफैंले आफ्नो मुल्याङकन गरेर अस्पताल जानुपर्छ बेलैमा उपचार गर्न सकिएमा यो रोगबाट छुटकरा पाउन सकिन्छ । त्यसको उपचार अब बी एण्ड सी हस्पिटलमा नै सुरु भएको छ । मानसिक रोग सम्बन्धि उपचार गर्ने नेपालकै पहिलो अस्पताल पनि यही हो ।
के– के हुन मानिसक रोगका कारणहरु ?
– वंशानुगत रुपमा सर्ने
– न्युरोट्रान्समिटरको गडबढी जस्तै डोपामाइन, सेरोटोरिन र नोरेपिरेफ्रिन
– हर्मोनको गडबडी जस्तै थाइराई, एड्रिनल, ग्रोथ हर्मोनको गडबडी भएमा
– शारीरिक रोग लामो समय समयमा लाग्छ जस्तै चिनिको रोग, मृगौलाको रोग आदि
– तात्कालिन घटनाक्रम जस्तै मानिस मर्नु, नोक्सानी हुने कुनैपनि घटना घट्नु
– लागू पदार्थ सेवन गर्नाले
– गर्भवस्थामा संक्रमण, मस्तिष्कको वृद्धिमा रोक आदि ।
–अनावश्यक कुरामा बारम्बर एकोहोरो गहिरो सोचाई नगर्ने ।
–अर्काको उपलब्धिलाई सजिलै ग्रहण गर्ने र खुशी हुने ।
–पुराना रुढीवादीका कुरा जुन वर्तमानमा झुट्टा सावित भएका छन् तिनमा विश्वास नगर्ने ।
– हरेक काममा खुसी, सन्तुष्ट र सुखी बन्न सिक्ने ।
– जे छ त्यसमा सन्तुष्ट हुने, तर मिहेनत गर्न नछाड्ने ।
– लागू पदार्थ, रक्सी, ड्रग्स सेवन गर्दा मानसिक रोग लाग्ने सम्भावना धेरै रहने भएकोले, यी वस्तुबाट टाढा रहने ।
– अति नैतिकवान नबन्ने र अरुबाट पनि त्यस्तो बढी आशा नगर्ने ।
– आफ्ना समस्या आफ्नो परिवार, साथीभाईलाई भन्ने बानी गर्ने जसबाट मनको उत्तेजना (चिन्ता) कम गर्न सहयोग मिल्छ ।
– मनलाई सधै शान्त राख्ने ।
मानसिक रोग लागेको कसरी चिन्ने ?
–मानिसमा धेरै अंगका जटिल लक्षण एकैचोटी देखिएमा ।
–अनौठो व्यवहार देखापरेमा ।
–एक्लै बोल्ने, एक्लै हांस्ने गरेको देखेमा ।
–अरुदेखि शंका गर्ने देखिएमा ।
–आत्तिने, डराउने, चिन्ता गर्ने, घरबाट भाग्ने गरेमा ।
मानसिक रोग बारे जान्नै पर्ने कुरा
–मानसिक रोग अति सामान्य (जस्तै टाउको दुख्ने मात्र) देखि कडा खालका (एक्लै बोल्ने, एक्लै हाँस्ने पागलपन) सम्मका हुन्छन् । सामान्य खालको मानसिक समस्या हुँदा आत्तिनु हुदैन र उपचार गर्न पनि हिचकिचाउनु हुदैन । कडा मानसिक रोगका विरामीलाई परिवारका सदस्यको सहयोग अति आवश्यक छ ।
– मानसिक रोग लाग्नु पापको फल होइन । देवी देउताको श्रप लागेको भन्ने प्रचलन पनि रहेको छ तर त्यो गलत हो ।
– उपचार गरे मानसिक रोग निको हुन्छ ।
– मानसिक रोगका विरामीलाई सबैले सहयोग गर्न पर्छ ।
– उपचार गरिरहेका मानसिक रोगका विरामीले डाक्टरको सल्लाह विना आपैm औषधि छाड्नु हुदैन ।
– मानसिक रोगका विरामीहरु घरपरिवार, समाज तथा द्वन्दको कारण शोषणमा पर्न सक्छन् ।
मानसिक रोगको उपचार सम्भव छ
– मानसिक रोगको उपचार सम्भव छ । त्यसैले सबैले आफुमा भएको समस्या खुलस्त रुपमा ब्यक्त गर्नुपर्ने र उपचारका लागी अब तपाईले बीएण्डसी हस्पिटलमा नै सेवा पाउन सक्नु हुन्छ । म यो हस्पिटलमा २४ औं घण्टा सेवामा तल्लिन रहेको छ । हामी औषधी र मनोपरामर्श सहित उपचार गछौं । अहिले दैनिक ४÷५ जना दैनिक उपचारमा आउने गरेका छन् । तपाई लाई पनि कुनै समस्या भएमा तुरुन्त सम्र्पक गर्नुहोला ।